Business Model Canvas (BMC) - Akyanpay
Go to Akyanpay Home
Alexander Osterwalder ဆိုတဲ့သူဟာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်business model ရေးဆွဲတဲ့အခါ သုံးဖို့အကျိုးရှိပြီး ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ template တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
Business Model Canvas (BMC) ဆိုတာ ဘာလဲ?
BMC လို့အတိုကောက်ခေါ်နေကြတဲ့ Business Model Canvas ဆိုတာဟာ စီးပွားရေးလုပ်င န်းတွေအတွက်အသစ်အသစ်သော business model တွေ ဖန်တီးတဲ့အခါသာမက ရှိပြီးသား business model တွေကို ပြုပြင်တာ ဖြည့်စည်းတာ တိုးတတ်အောင်လုပ်တာ စတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာ သုံးနိုင်တဲ့မဟာဗျူဟာကျတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလျင်လျင်မြန်မြန်လွယ်လွယ်ကူကူပုံဖော်နိုင်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အကြံဉာဏ်က ဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းလင်းစေပြီး ဒီအကြံဉာဏ်ကနေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ် ခုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့လိုအပ်တာတွေကိုပုံဖော်ပေးပါတယ်။ BMC မှာဆိုရင်ဟိုးအရင်ကလိုသမားရိုးကနည်းတွေလိုစာမျက်နှာတွေ အများကြီး မလိုပါဘူး။ စာရွက်တစ်မျက်နှာပေါ်ကနေပြီး လုပ်ငန်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေ မလိုအပ်တဲ့အရာတွေ စတာတွေကိုဖော်ပြပေးမှာပါ။ BMC ဟာ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီး ရှင်းလင်းပြတ်သား တဲ့အတွက်အလွန်အသုံးတည့်တဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
BMC မှာ ဘာတွေပါလဲ?
Canvas ရဲ့ညာဘက်ကတော့စားသုံးသူဝယ်သူ ( external အပြင်ဘက် ) အပိုင်း ပါပြီး ဘယ် ဘက်မှာတော့လုပ်ငန်း ( internal အတွင်းပိုင်း )ဖြစ်ပါတယ်။ အလယ်မှာတော့ value Propositions ဆိုတာ ရှိပြီး ညာဘက်နဲ့ဘယ်ဘက်နှစ်ခုကြား တန်ဖိုးဖလှယ်တာပါ။ customers နဲ့ business ဒီနှစ်ခုကြားမှာ value ကို exchange လုပ်တာပါ။ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း စာရွက်တစ်မျက်နှာပေါ်မှာပဲ ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ business Model ကိုဖန် တီးနိုင်မှာပါ။
1. Value Propositions ဘယ်လိုစီးပွားရေး လုပ်ငန်းမျိုးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် value Propositions ဟာ အရေးကြီးဆုံးထဲ မှာ ပါဝင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းနဲ့ customers နဲ့ကြားထဲမှာ တန်ဖိုးတစ်ခုလဲလှယ်မှုပြုလုပ်တာပါ။ customers တွေက ငွေကိုတန်ဖိုးအနေနဲ့လဲလှယ်လိုက်ရပြီး လုပ်ငန်းဘက်က customers တွေရဲ့ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် customers တွေကိုတန်ဖိုးတစ်ခုပေးလိုက် တာပါ။ ဒီလိုပဲ နှစ်ယောက်ကြားမှာ တန်ဖိုးဖလှယ်မှုပြုလုပ်ကြတာပါ။ ဒီအပိုင်းမှာတော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းက ဘယ်လို ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းပေးမှာလဲ။ လူတွေ ဘာလို့ ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းချင်ကြတာလဲ။ ဒီပြဿနာရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းက ဘာလဲ စတဲ့အ ရာတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာပါ။ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကတော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ customer segments ကိုလိုက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ product or services က အဲ့ဒီ customers တွေရဲ့ဘယ်လို ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးမလဲ စဉ်း စားရမှာပါ။
2. Customer Segments ဒီအပိုင်းကတော့ကိုယ်က ဘယ်သူ့အတွက် value create တန်ဖိုးဖန်တီး မလဲဆိုတာပါ။ Customer segment လုပ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ customers တွေကိုတူရာအုပ်စုတွေခွဲပြီး အစုအစုလေးတွေ လုပ်တာပါ။ အသက်အရွယ်တူတွေ gender တူတာတွေ စိတ်ဝင်စားမှု interest တူတာတွေ အလေ့အကျင့်တူတာတွေ စသဖြင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်တာပါ။ customer segments အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုစီကိုကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်းက ဘယ်လို products တွေ services တွေ ပေးမှာလဲ။ Customer segment မှာ နောက်ထပ်ကြည့်ရမဲ့အရာတစ်ခုကတော့ဈေးကွက်အရွယ်အစားဖြ စ်ပါတယ်။ ဒီ customer segment ထဲမှာ လူဘယ်လောက်ပါဝင်လဲ။ ဒါတွေ အားလုံး စဉ်းစား တွက်ချက်ရမယ်။
3. Customer Relationships Customer Relationships မှာတော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းက customers တွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါ ဘယ်လိုနည်းလမ်း သုံးမလဲဆိုတာပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ကိုယ့်လုပ်ငန်းက customer တစ်ယော က်ချင်းနဲ့ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်ရမှာလား။ Online ကိုသုံးပြီး ဆက်သွယ်မှာလား။ selfservice အနေနဲ့လုပ်မလား။ စသည်ဖြင့်ပေါ့။
4. Channels ကိုယ်ရောက်စေချင်တဲ့ customer segment ကိုရောက်ဖို့ဘယ်လို channel ကိုသုံးရမလဲ။ ဘယ် channels ကိုအသုံးပြုရင်ပိုထိရောက်မလဲ။ ကိုယ်ပိုင် channel ကိုသုံးနိုင်သလို partner channel ကိုလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ကိုယ့်customers တွေက social media ကိုအသုံးများတဲ့သူတွေလား။ ဒါဆိုရ င် social media ဆိုတဲ့ channel ကိုသုံးရမယ်။ ကားမောင်းရင်းနဲ့ရေဒီယိုနားထောင်တဲ့သူတွေလား။ ဒါဆို radio channel သုံးရမယ်။ စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ကိုယ့်ရဲ့ customers segment ပေါ် မူတည်ပြီး အသုံးပြုရမှာပါ။
5. Key Activities တွေကတော့လုပ်ငန်းက customers တွေကို value Propositions ပေးဖို့ လုပ်ဆောင်ရတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါ။
6. Key Resources - Customer တွေကို value Propositions ပေးဖို့လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့ resources တွေကတော့ key resources တွေပါ။ ဥပမာအားဖြင့်လူတွေ လိုတယ်။ နေရာလိုတယစသည်ဖြင့်ပေါ့။
7. Key Partners တွေကတော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းက customers တွေကို value Propositions လုပ်တဲ့အခါ key activities လုပ်ဆောင်ချက်တွေ လုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ လိုအပ်တဲ့ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတွေပါ။ ဥပမာ ကိုယ့်ရဲ့ suppliers တွေ။ ကိုယ်က ဒီ value Propositions ကိုတစ်ယောက်ထဲ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူတွေ အားကိုးလို့ရလဲဆိုတာ စဥ်းစားရပါမယ်။
8. Cost structures - ဒါကတော့လုပ်ငန်း လည်ပတ်ဖို့ကုန်ကျစရိတ်ပါ။ ဥပမာ - key activities တွေ လုပ်ဖို့ဘယ်လောက်ကုန်မလဲ။ key resources ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ။
9. Revenue Streams - လုပ်ငန်းက value Propositions ဒါမှမဟုတ် customers တွေရဲ့ ပြဿနာတွေရဲ့အဖြေတွေကိုငွေကြေး အမြတ်ငွေ အနေနဲ့ပြောင်းတာပါ။ လုပ်ငန်းမှာ ဈးနှုန်းသတ်မှတ်တာလဲ အရေးကြီးပါတယ်။ Revenue ဘယ်လိုရမလဲ။ product တစ်ခုချင်းစီအတွက်ယူမှာလား။ service အတွက်ယူမှာလား။ subscription အနေနဲ့ယူမှာလား။ စသည်ဖြင့်စဉ်းစားရွေးချယ်ရပါမယ်။
​Business Model Canvas ကို တည်ဆောက်နိုင်ပါပြီ။
Next - Templateများ အသုံးပြုပုံ